काठमाडौंमा कसले मच्चायो सुई आतंक ? - Aarthiknews
काठमाडौंमा कसले मच्चायो सुई आतंक ?
काठमाडौं । अज्ञात व्यक्तिले सुईजस्तै तिखो चीजले आफूलाई घोचेको भन्दै पछिल्लो एक सातामा पाँच महिलाले उजुरी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार सबैजसो घटना कालीमाटी–ढल्कु क्षेत्रमा राति ९ देखि १० बजेको अवधिमा भएको देखिन्छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका डीएसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार नयाँ घटना बाहिर आउन थालेपछि पुराना घटना पनि प्रहरीकामा आउन थालेका छन् । स्वयम्भू वृत्तमा जेठ २० र २९ गते भएको घटनालाई लिएर उजुरी भर्खरै परेको छ । एक युवतीले आफू श्रीमानसँग हिँडिरहेका बेला मोटरसाइकलमा आएको मान्छे सुईजस्तै तिखो चीजले घोचेर बेपत्ता भएको प्रहरीलाई बताएकी छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार कोही मानसिक समस्या भएको व्यक्तिले अथवा कसैले त्रास फैलाउन यस्तो गरेको हुन सक्ने देखिन्छ । निवेदन दर्ता गराएका पाँच युवती विवाहित र अविवाहित दुवै भएकाले प्रेम सम्बन्ध वा यस्तै केही कारणले घटना नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । ‘घरबाट बाहिरै निस्कन नमिल्ने गरी असुरक्षा फैलिएको भन्ने अफवाहमा सत्यता छैन । ढुक्क भएर हिँडदा हुन्छ,’ बोगटीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।